Caawinta Visa ee Jaamacadda - Kheyraadka Bilaashka ah - Macluumaadka Visa Ardayga
Boqortooyada Ingiriiska ayaa loo arkaa inay tahay meesha labaad ee ugu caansan daraasad caalami ah oo adduunka laga helo. In kabadan 40,000 oo arday caalami ah ayaa UK yimaada sanad walba. Boqortooyada Midowday (UK) waxay dhistay nidaam waxbarasho oo horseed u ah adduunka. Wadamo badan oo adduunka ah waxay raacaan qaabka waxbarashada sare ee Boqortooyada Midowday.
Waxaad ka heli doontaa dhowr Jaamacadood oo sharaf leh iyo kulleejooyin Boqortooyada Midowday, jaamacadahaasna waxay bixiyaan kumanaan koorso ah oo xiisa badan oo ardayda caalamiga ah. Boqortooyada Midowday (UK) waxay sannado badan u ahayd meel ku habboon ardayda, waxayna leeyihiin in kabadan hal milyan oo arday caalami ah oo ka kala yimid meelo kala duwan oo adduunka ah.
Maxaa looga bartaa Boqortooyada Midowday? Taasi waa su’aal muhiim ah. Waxaa jira sababo badan oo ah inaad u tixgaliso Boqortooyada Ingiriiska waxbarashadaada sare. Waxay noqon kartaa go'aan nolosha lagu beddelo inaad wax ku barato Boqortooyada Midowday, marka si laguugu habboon yahay ayaannu uga wada hadalnay dhammaan qodobbada waaweyn si faahfaahsan. Waa daraasadda ugu wanaagsan tusaha Boqortooyada Midowday.
Aqoonsiga Caalamiga ah
Wax ka barashada Boqortooyada Midowday (UK) waxay noqon kartaa go'aanka ugu fiican ee aad noloshaada ku gaari karto maxaa yeelay faa iidooyinka aad u weyn ee xagga tacliinta ah. Haddii aad si guul leh ku dhammaysato shahaadadaada waxbarasho ee Boqortooyada Midowday markaa shahaadadaadu waxay noqon doontaa mid la aqoonsan yahay laguna ixtiraami doono adduunka oo dhan. Waxaad helaysaa fursado badan oo kuu banaan xirfaddaada xirfadeed. Waxaan door bidnay inaan tan bixinno Caawinta Visa ee Jaamacadda Bogga loogu talagalay qof kasta oo raadinaya inuu wax ku barto Boqortooyada Midowday dibada.
Jaamacadaha UK ayaa laga aqoonsan yahay adduunka oo dhan sababtuna tahay heerka tacliinta sare iyo jawi adag. Heerarka tacliinta aad ayey u sarreeyaan jaamacadahaan. Tayada waxbarashadu waxay kor u qaadi doontaa awoodaada si aad u hesho shaqooyinka mushaharka wanaagsan, oo aad dhisto aasaas adag si aad ula kulanto caqabadaha casriga ah.
Kala duwanaanta Koorsooyinka Waxbarashada
Boqortooyada Midowday (UK) waxay leedahay machadyo waxbarasho oo badan. Dhammaan jaamacadaha iyo machadyadu waxay leeyihiin fursado ardayda ajnabiga ah, machadyadan ku yaal Boqortooyada Midowdayna waxay bixiyaan wax kabadan 50,000 oo koorso waxbarasho ah, in kabadan 25 maado. Jaamacado badan ayaa u fidiya ardaydooda inay doortaan koorsooyin kala duwan oo xulasho ah oo ah barnaamij shahaado ah, kuwaas oo ku habboon danahooda.
Jaamacadaha Boqortooyada Midowday (UK) waxay bixiyaan koorsooyin, kuwaas oo ka gaaban wakhtiga isla markaana kharashkooda wax ku barta marka loo eego dalalka kale. Jaamacadaha Oxford iyo Cambridge waa machadyada ugu caansan adduunka sababtuna tahay waxbarashadooda tayada sare leh laakiin waxaa jira jaamacado kale oo badan oo ku yaal Boqortooyada Ingiriiska, kuwaas oo bixiya waxbarasho tayo sare leh.
Meesha ugu Fiican ee lagu Noolaan karo iyo Daraasad
Sida lagu xusay sahan dhowaan la sameeyay, London waa magaalada koowaad ee ugu wanaagsan ardayda caalamiga ah ee adduunka. Baadhitaanka ayaa lagu fuliyay aasaaska tilmaamayaal kala duwan sida kartida, aragtida ardayda caalamiga ah, rajo-gelinta, heerarka waxbarashada, darajada jaamacadda. Waxaa jira afar magaalo oo kale oo Boqortooyada Ingiriiska ka mid ah oo liiska ku jira Sheffield, Liverpool, Bristol iyo Leicester. Boqortooyada Midowday (UK) waxay ka kooban tahay England, Northern Ireland, Scotland iyo Wales. Waa meel wanaagsan oo lagu noolaado laguna barto ardayda caalamiga ah.
Dadka raadinaya inay wax ku bartaan Wales, si aad ah ayaan kugula talineynaa Jaamacadda Bangor
Faahfaahin intaa ka badan ka ogow: https://www.bangor.ac.uk/international/
Dadka doonaya inay wax ku bartaan England, waxaan ku talinaynaa Jaamacadda Cambridge.
Boqortooyada Midowday (UK) waa gobol dhaqammo kaladuwan ku yaal, halkaas oo aad ka heli karto dhaqamo kala duwan, caqiidooyin iyo luqado kala duwan. Waxaad fursad u heli doontaa inaad la kulanto dad kala duwan oo adduunka oo dhan ah, taas oo adiga waayo-aragnimo weyn u noqon doonta adiga. Dalku wuxuu leeyahay mid ka mid ah nidaamyada gaadiid ee ugu wax ku oolsan, markaa uma baahnid inaad ka walwaleyso safarka.
Horumar iyo Deegaanka waxbarasho casri ah
Muddo sanado ah hay'adaha Boqortooyada Midowday (UK) waxay qaateen tabaha casriga ah iyo tabaha casriga ah. Machadyadan ayaa fuliya qaabab qiimeyn oo kaladuwan si ay u qiimeeyaan ardaydooda, taas oo aan kaliya kor u qaadin aqoonta ku saleysan maadooyinka ee ardayda laakiin sidoo kale ku xeel dheer shaqsiyada ardayda si ay u noqdaan bare sare.
Machadyadani waxay adeegsadaan qaab waxbarid wax ku ool ah, oo ka dhigaya barida mid aad u haboon qeybta ay khusayso. Kuwani barista ficil iyo farsamooyinka barashada kor u qaadida khibradda iyo khibrada ardayda ee waxsoosaarkooda la xiriira.
Xirfadaha Luuqadda Ingiriiska
Boqortooyada Ingiriiska waa hoyga luqadda Ingiriiska. Ingiriisigu waa luqad caalami ah, in kabadan 65 dal oo adduunka ahna waxay u isticmaalaan Ingiriisiga luuqadooda qaran. In kabadan hal bilyan oo qof ayaa ku hadla luuqada Ingriisiga, 80% machadyada caalamiga ahna waxay luuqada ingiriisida u isticmaalaan bartanka.
Markaad wax ku barato jaamacadaha UK, waxaad awoodi doontaa inaad horumariso khibradda luqadda Ingiriisiga, taas oo kuu abuuri doonta fursado badan noloshaada. Markaad Ingiriisiga ku baratid lahjadda Ingiriisiga, waxaad noqon doontaa xulasho soo jiidasho leh loo shaqeeyayaasha.
Awoodda shaqo helidda
Sida laga soo xigtay QS Graduate awooda shaqaalaysiinta 2019, jaamacadaha ugu sareeya ee Boqortooyada Midowday waxay leeyihiin awooda ugu qalin jabinta ugu sarreysa Yurub. In kabadan 90% ardayda cusub ee ka qalin jabisay jaamacadaha Boqortooyada Midowday waxay si dhaqso ah shaqo u helaan shaqo bixiyayaasha ugu sareeya adduunka. Awoodda shaqaalaysiinta ee Boqortooyada Midowday (UK) waxay u horseedaa soo jiidasho aad u wanaagsan ardayda caalamiga ah inay yimaadaan oo wax ku bartaan machadyadan.
Raga ugu Weyn Wadamada Waaweyn
Markuu ardaygu go’aansado inuu wax ku barto dibedda waxbarasho sare markaa wuxuu heystaa seddex fursadood oo hortiis ah oo ay ka mid yihiin USA, United Kingdom iyo Australia maxaa yeelay sedexdaas dal waxay leeyihiin jaamacadaha ugu sareeya adduunka, waxayna bixiyaan waxbarasho tayo leh. Haddii aan isbarbar dhigno khidmadaha wax lagu barto ee Jaamacadaha iyo kharashyada kale ee nolosha ee seddexdaas waddan markaa Boqortooyada Midowday (UK) waxay leedahay faa iidada kharashyada nolosha ee ugu jaban iyo qarashka jaamacadaha.
Lacagta wax lagu barto ee machadyada Boqortooyada Midowday (UK) way ka yar yihiin USA iyo Australia. Iskucelceliska khidmadda wax lagu barto ee jaamacadaha dalka UK waxay ka yar tahay £ 10,000 laakiin celceliska khidmadda waxbaridda ee Mareykanka iyo Australia ayaa ka badan £ 12,000. Haddii aan isbarbar dhigno kharashaadka nolosha ee seddexda meelood ee aad ugu jeceshahay markaa Boqortooyada Midowday (UK) sidoo kale waxay leedahay faa iido yar oo nolosha nolosha ah marka loo eego Mareykanka iyo Australia.
Jawiga dhaqamada kaladuwan
Boqortooyada Midowday waxay leedahay bulsho dhaqamo kala duwan leh. Waxaad ka heli doontaa dhaqamo iyo diimo kaladuwan adduunka oo dhan oo Boqortooyada Midowday ah. Dalku wuxuu leeyahay shuruuc takoor gobol, dhaqan iyo mid diineed, wuxuuna siiyaa fursado isku mid ah dadka oo dhami. Waxaad ka heli doontaa dad ka kala yimid dalal kala duwan, dhaqamo iyo diimo ku nool isla magaalada, oo ay adag tahay in lagu arko Wadamo kale.
Kala duwanaanta kuma eka dhaqamada iyo diimaha, waxa kale oo aad ka heli doontaa makhaayado iyo meelaha cuntada laga helo, oo cuntada ka bixiya dalal kala duwan. Waxaad kaloo sahamin kartaa dhadhanka cusub iyo dhadhanka cusub ee waddammada kala duwan ee Boqortooyada Midowday. Kala duwanaanshaha shaqaalaha barista waa sabab kale oo ardayda caalamiga ah ay ugu dareemaan gurigooda UK. Ku dhawaad ​​boqolkiiba 40 shaqaalaha tacliinta ee jaamacadaha kaladuwan waxay ka soo jeedaan ajaaniib, taasoo waxtar weyn u leh ardayda caalamiga ah.
Jaamacad kastoo aad doorato inaad wax ku barato Boqortooyada Midowday, waa inaad la kulanto kharashaadka sida kharashaadka nolosha iyo kharashka gaadiidka, laakiin uma baahnid inaad taas ka walwaleyso. Haddii aad doorato inaad wax ku barato Boqortooyada Midowday markaa waxaa laguu oggolaan doonaa inaad shaqeyso intaad waxbaraneyso. Inta lagu jiro shahaadadaada, waxaa laguu oggol yahay inaad shaqayso wakhti-dhiman ilaa 20 saacadood usbuucii, taas oo kugu filan inaad daboosho kharashaadkaaga nolosha billaha iyo gaadiidka.
In aad qabato shaqo waqti-dhiman ah inta lagu jiro daraasadahaaga waxay xoojin doontaa xirfadahaaga waxbarasho, waxayna kuu diyaarin doontaa xirfad shaqo. Markaad dhammeyso shahaadadaada waxaad ka faa iidaysan kartaa fursado shaqo oo buuxda oo Boqortooyada Midowday ah. Si aad uga faa'iideysato fursadan waa inaad ka heshaa shaqo bixiye ku sugan Boqortooyada Midowday, sidoo kale waa inaad buuxisaa shuruudaha mushaharka ugu yar. Shahaado UK ayaa runtii kaa caawin doonta inaad hesho shaqo ku habboon oo leh mushahar soo jiidasho leh.
Markaad laqabsato shaqadaada gudaheeda Boqortooyada Midowday markaa waad badali kartaa xaalada fiisadaada, waxaadna codsan kartaa dhalashada joogtada ah. Mar labaad waa inaad la kulanto shuruudo gaar ah si aad u hesho dhalashada Ingiriiska sida joogtada ah ee mushaharka ugu yar iyo joogitaanka Boqortooyada Midowday.
Faa'iidooyinka Daryeelka Caafimaadka
Dalku wuxuu leeyahay nidaam daryeel caafimaad oo habaysan oo heer qaran ah, taas oo yareyn doonta qiimaha daryeelkaaga caafimaad. Haddii aad tahay arday caalami ah oo aad haysato fiiso arday Tier 4 ah, oo aad samaynayso barnaamij shahaado ah lix bilood iyo ka badan markaa waad ka faa'iidaysan kartaa xarumaha caafimaadka Adeegga Caafimaadka Qaranka ee Boqortooyada Midowday. Waa inaad ku bixisaa £ 150 sanadkii fiisooyinkaaga kor u kaca caafimaadkaaga intaad gudbineyso lacagta fiisaha.
Xaq u lahaanshaha NHS, ardayda caalamiga ahi waxay heli karaan dhammaan dheefaha caafimaad sida muwaadin UK ah. Waad iska diiwaangelin kartaa Dhakhtarka Guud, oo aad xaq u yeelan kartaa daaweyn deg-deg ah, daaweyn xagga dhimirka ah iyo ogaanshaha cudurada iyadoo aan wax qarash ah oo dheeraad ah lagaa qaadin.
Wadada loo maro Yurub
Haddii aad tahay qof xiiseeya safarka oo aad jeceshahay inaad booqato meelo kala duwan markaa Boqortooyada Ingiriiska waa meesha kuugu fiican adiga. Markaad Boqortooyada Midowday noqoto, waxaad u safri kartaa Northern Ireland, Wales iyo Skotland si aad wax uga ogaatid dhaqamada kala duwan iyo qaab nololeedkaaga. Arday ahaan, waxaad heli doontaa qiimo dhimis gaar ah oo qiimaha tareenka.
Boqortooyada Midowday (UK) waa irridda Yurub, waxaadna u isticmaali kartaa gaadiidka dadweynaha inaad u safarto Yurub. Qadka Channel-ka ayaa ah wadada ku gayn kara Yurub dhowr saacadood. Uma baahnid fiiso dheeri ah waddamada Yurub, waxaad si sahlan u heli kartaa kaararka gaadiidka dadweynaha ee waddamada Yurub si sahlan. Inta lagu jiro usbuuc-dhamaadkaaga iyo fasaxyada dheer, waad sahamin kartaa dhammaan waddamada Yurub.
Tirada Ardayda Caalamiga ah ee Weyn
Boqortooyada Midowday (UK) waxay ka mid tahay waddamada soo dhaweynaya ardayda caalamiga ah, oo waxay siisaa dhammaan tas-hiilaadka casriga ah iyo fursadaha loo siman yahay si ay ugu fiicnaadaan shaqadooda. Jaamacadaha Boqortooyada Midowday (UK) ayaa ah kuwa ugu jecel xulashooyinka ardayda adduunka oo idil. Dalku wuxuu leeyahay arday badan oo ajnabi ah.
Marka loo eego tirooyinkii ugu dambeeyay ee Hay'adda Tirakoobka Tacliinta Sare ee Boqortooyada Ingiriiska, waxaa hadda jira 485,650 arday oo caalami ah oo wax ku baranaya Boqortooyada Midowday. 342,620 arday oo caalami ah ayaa ka yimid meel ka baxsan Yurub, iyo 143,025 arday ayaa ka yimid Midowga Yurub, marka laga reebo Boqortooyada Ingiriiska. Arday fara badan oo caalami ah, ayaa fursadaha kugu xiri doona dad isku fikir ah oo adduunka ka kala socda.
Siyaasadda Visa fudud
Waxaad u baahan tahay fiiso arday ansax ah si aad wax ugu barato Boqortooyada Midowday haddii aad ka mid tahay waddan ka baxsan Midowga Yurub. Ma ahan wax adag in la helo fiisaha ardayda ee Boqortooyada Midowday, nidaamka iyo nidaamka fiisaha ayaa aad isu bedbeddela marka la barbar dhigo waddamada kale sida Maraykanka iyo Australia. Fiisaha ardeyda ee ardayda caalamiga ah waxaa lagu magacaabaa Tier 4 visa, waxaana loo qeybiyaa labo qeybood oo waaweyn.
Mid waa Tier 4 (General) dadka waaweyn, qeybta kalena waa Tier 4 (Cunug) loogu talagalay carruurta da'doodu u dhaxayso 4 illaa 16 sano. Dhamaan Jaamacadaha iyo jaamacadaha heerka ugu sareeya waxay leeyihiin aqoonsi kafaalaqaade Tier 4 ah oo u saamaxa inay ogolaadaan ardayda ajnabiga ah.
Khidmadda arjiyada fiisaha ardeyda waa ku dhawaad ​​£ 335 codsade kasta oo hooseeya marka la barbar dhigo waddamada kale. Waa inaad dalbataa saddex bilood ka hor bilowga koorsadaada. Wadamada qaarkood, laanta socdaalka waxay u yeeri kartaa codsadaha wareysiga si uu u ogaado inuu ardeygu dhab yahay, uuna doonayo inuu ku sii wadan karo waxbarashada Boqortooyada Midowday.
Haddii aad ka timid Switzerland ama waddan Midowga Yurub ah markaa uma baahnid fiiso arday si aad ugu safarto oo aad wax uga baratid Boqortooyada Midowday. Tan iyo markii Boqortooyada Midowday ay ku dhawaaqday inay ka baxdo Midowga Yurub, waxaa jira isbedelo yaryar oo ku saabsan siyaasada socdaalka. Haddii aad ka timid wadanka EU, oo aad timid UK kahor 1st Janaayo 2021 markaa uma baahnid wax fiiso ah oo wax lagu barto laakiin haddii koorsadaadu ka badan tahay hal sano, oo aad qorsheyneyso inaad sii dheeraato 1 Janaayo 2021 ka dib waa inaad dalbataa qorshaha dejinta EU, kaas oo xor u ah dalabka.
Waxyaabaha ay tahay inaad sameysid intaad u safraysid Boqortooyada Midowday
Imaatinka Boqortooyada Midowday sida arday caalami ah waa wax sahlan laakiin ku noolaanshaha Boqortooyada Midowday waxay noqon kartaa waxyar murugo kuu leh haddii aadan isu diyaarin caqabadaha soo socda. Haddii aad tahay arday caalami ah gudaha Boqortooyada Midowday markaa waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso dhawr qodob oo muhiim ah ka hor intaadan boodin.
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad hubiso inaad haysato lacag aad ku heli karto shahaadadaada iyo kharashyadaada nolosha. Haddii aad tahay arday Midowga Yurub ah markaa waxaad xaq u leedahay maalgalinta ardayda, oo lacagtaadu waxay la mid noqon doontaa muwaadin Biritish ah, laakiin ardayda ka socota Midowga Yurub uma qalmaan wax amaah ah, waxayna bixin doonaan khidmad aad u sareysa sida marka loo eego muwaadin Ingriis ah. Jaamacadaha UK waxay kaloo bixiyaan barnaamijyo deeq waxbarasho oo caalami ah, waxaadna isku dayi kartaa nasiibkaga waxbarasho-waxbarasho.
Codso Visa Ardayga
Waxaa laga yaabaa inaad u baahatid fiiso arday oo ansax ah oo wax ku barta Boqortooyada Midowday Haddii aad ka soo jeedo waddamada EU markaa uma baahnid wax fiiso arday ah, waad u safri kartaa oo aad wax ku baran kartaa Boqortooyada Midowday adoo adeegsanaya baasaboorkaaga oo keliya, laakiin haddii aadan ahayn muwaadin EU ahayn markaa waxaad u baahan tahay fiiso arday oo ansax ah. Waa inaad dalbato fiiso arday ugu yaraan saddex bilood ka hor bilowga kooraska.
Waa tan wax ku anfacaya Foomka Codsiga Visa Ardayga kana yimid mid ka mid ah Jaamacadaha ugu caansan dalka Ingiriiska, kuwaas oo ah Jaamacadda Bangor.
Waa inaad diyaarsato hoygaaga ka hor intaadan UK gelin. Waxaad u baahan tahay inaad la xiriirto jaamacaddaada si aad u dejiso. Jaamacadaha badankood waxay bixiyaan hoy hoyga ah oo loogu talagalay ardayda caalamiga ah, oo haddii qaar ka mid ah sababaha aadan u baahnayn hoy jaamacadeed waxaad sidoo kale qol ka ijaaran kartaa milkiile guri gaar ah.
Caddaynta gaadiidka dadweynaha
Markaad tahay arday caalami ah waa inaad aad ugu safartaa Boqortooyada Midowday. Waxaa lagugula talinayaa inaad ogaato nidaamka gaadiidka dadweynaha ee dalka, kaasoo kuu badbaadin kara boqolaal rodol. Boqortooyada Midowday (UK) waxay leedahay adeeg bas oo maxalli ah magaalo kasta, oo ku siin kara hab kugu habboon oo aad u safri karto. Adeegyadan basku waxay bixiyaan tikidyo badan iyo kaararka basaska ardayda, waad ka faa'iidaysan kartaa tas-hiilaadkaas si aad lacag u keydiso.
Ogow Saacadahaaga Shaqada
Arday ahaan ahaan waxaa laguu oggol yahay inaad shaqayso qayb ka mid ah shaqooyinka-waqtiga-dhiman si ay u daboosho kharashyadaada nolosha. Ardayda ka socota wadamada EU-da wax xaddidaad ah kuma hayaan saacadaha shaqadooda, waxayna ku shaqeyn karaan saacado badan inta ay rabaan, laakiin ardayda caalamiga ah ee ka socota wadamada EU-da ayaa leh xayiraad, waxayna shaqeyn karaan oo keliya 20 saacadood usbuucii. Haddii aad shaqeyso wax ka badan 20 saacadood usbuuc gudaheed markaa waaxda socdaalka ayaa kaa qaadi kara talaabo sharci ah.
Boqortooyada Midowday (UK) waa mid ka mid ah waddammada ugu caansan adduunka ee ardayda caalamiga ah. Waad dooran kartaa mid ka mid ah jaamacadaha ugu sareeya adduunka, halkaas oo aad ka heli doonto waxbarasho horumarsan oo jawiga casriga ah. Markaad wax ku baraneyso Boqortooyada Midowday, ma aha inaad ka walwalayso aqoonsiga shahaadadaada maadaama ay aqbaleen loo shaqeeyayaasha adduunka oo dhan. Wax ka barashada Boqortooyada Midowday waxay xaqiiqdii noqon doontaa go'aan nolosha lagu beddelo.